ऋचासँग क्यारेक्टरका कुरा- 'फुलीलाई धेरैले रुचाए' | Nagarik News - Nepal Republic Media
ऋचासँग क्यारेक्टरका कुरा- 'फुलीलाई धेरैले रुचाए'
मेरो डेब्यु फिल्म 'फस्ट लभ'मा मैले निर्वाह गरेको चरित्र हो यो। फिल्ममा म बार डान्सरको भूमिकामा थिएँ। लभर गर्ल पनि थिएँ। एकसाथ फिल्ममा दुईखाले चरित्र देखाउनु थियो। पहिलो फिल्म भएकाले मेरा लागि दुवै चरित्र निर्वाह गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। नीतु बन्नका लागि पोखरामा फिल्म सुटिङ हुनुअघि त्यहाँका बार डान्सरहरूसँग घुलमिल गरेकी थिएँ। उहाँहरूको हाउभाउ नियालेकी थिएँ। पछि दर्शकले पनि रुचाइदिनुभयो।
सिरियल 'हाम्रो टिम'को यो क्यारेक्टर मलाई प्रिय लाग्छ। म सिरियलमा फुटबल कोचको भूमिकामा थिएँ। १७ जना केटाहरूलाई म फुटबल सिकाउँथेँ। यस चरित्रका लागि मैले ४० दिन फुटबल सिकेकी थिएँ। म महिला भए पनि यो चरित्र पुरुषले निर्वाह गर्ने खालको थियो। सबै केटैकेटा भएको ठाउँमा म एउटी केटी थिएँ। त्यसैले सिरियलको सुटिङ सकिँदासम्म त म आफैँ पनि केटाजस्तो भइसकेको थिएँ। मेरो जीवनमा एउटा भिन्न खालको चरित्र थियो यो।
फिल्म 'लुट'मा मैले निर्वाह गरेको चरित्र हो यो। फिल्ममा म तीनचार सिनमा मात्र देखिएकी छु। लभर गर्लको भूमिकामा छु। तर, पनि दर्शकमाझ मलाई चिनाउन सहयोग गर्योफ यस चरित्रले। यो फिल्मपछि धेरैले मलाई 'लुटको हिरोइन' भनेर चिन्नुभयो। मेरो करिअरलाई सपोर्ट गरेको चरित्र हो आयुषा।
फिल्म 'भिसा गर्ल'को यो चरित्र गर्दा मलाई एकदमै रमाइलो लागेको थियो। फिल्ममा म प्रोटागोनिस्ट भूमिकामा थिएँ। स्तुति मेरो जीवनसँग नजिक रहेको चरित्र हो। फिल्म गदैगर्दा स्तुति मै हुँ जस्तो लागेको थियो। किनकि, स्तुति सामाजिक सेवामा विश्वास गर्थी, स–सानो कुुरामा खुशी हुन्थी जुन मेरो वास्तविक चरित्र हो।
मलाई सबैभन्दा चर्चा दिलाउने चरित्र हो 'फुली'। फिल्म 'टलकजंग भर्सेस टुल्के'को यो चरित्रबाट मैले राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड पनि पाएँ। मैले पहिलोपल्ट अडिसन दिएर पाएको चरित्र पनि हो। थुप्रै अभिनेत्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पाएकी थिएँ। त्यही भएर पनि सम्भि्करहन्छु। फिल्ममा मैले पश्चिमेली थारु युवतीको भूमिका निर्वाह गरेकी छु। त्यहाँको लवजमा बोल्नु एकदमै चुनौती थियो। सुटिङ सुरु हुनअघि मैले बाग्लुङका मानिसहरूसँग भेटघाट गरेकी थिएँ। उहाँहरूलाई डायलग बोल्न लगाएर मोबाइलमा क्याप्चर गरेकी थिएँ। त्यही भएर सबैभन्दा बढी राम्रो प्रतिक्रिया दिलाउने चरित्र बन्यो यो। अझै पनि प्रायः कार्यक्रममा पुग्दा मलाई फुलीको डायलग बोल्न लगाउँछन्। अनि, म पश्चिमेली लवजमा भनिदिन्छु– 'त्यत्रा मन्छेको अगाडि मसँग बिहे गर्छु भन्न सर्म लागेन तलार्इं?'।
फिल्म 'को आफ्नो'को यो चरित्र मसँग नजिक रहेको चरित्र हो। मैले आफ्नै गाउँठाउँमा देखिरहेको चरित्र हो। फिल्म नचले पनि यो चरित्र मेरा लागि खास थियो। यो चरित्रले मलाई ट्रेलरबाटै चर्चा दिलाइदियो। पहिलोपल्ट यस्तो खालको चरित्र गरेकी थिएँ। धेरैले 'हिरोइन भएर यस्तो बुढीको भूमिका किन गरेको?' पनि भने। तर, कलाकारका रूपमा मैले यस्तो चरित्र निर्वाह गर्न पाउनु र सक्नु सौभाग्यको कुरा हो। आफूभन्दा तेब्बर जेठो भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ। सबैभन्दा बढी दुःख लुक्स बनाउनुमा थियो। नक्कली दाँत हाल्दा दुख्थ्यो। ओठ सुन्याइएको थियो। अनुहारभरि खत बसाइएको थियो।
यही शुक्रवारबाट रिलिज हुने फिल्म 'जंगे'को क्यारेक्टर हो यो। फिल्ममा म सौतेनी आमाको भूमिकामा छु। मैले पहिलोपल्ट यस्तो नेगेटिभ क्यारेक्टर गरेकी हुँ। पहिलोपल्ट यसरी खुलेको ग्लयामरस र बोल्ड क्यारेक्टर निर्वाह गरेकी हुँ। भिन्न खालको प्रिय लाग्ने चरित्र हो यो मेरा लागि।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७३ ०८:३२ मंगलबार
ऋचासँग क्यारेक्टरका कुरा- फुलीलाई धेरैले रुचाए